Apple Music waxay ku dareysaa qayb cusub: Fitness + | Waxaan ka socdaa mac
Dhamaadkii bishii la soo dhaafay, Apple waxay soo saartay nidaamkeeda tababareed ee cusub ee horay loo sii shaaciyey bilo kahor. Habboonaanta Apple + wuxuu noqday shayga cusub ee ay ku qancaan dadka adeegsada Apple, sidaa darteedna aysan shirkaddu ka laba labayn inay ku darto mid kale oo dahabkeeda ah, Apple Music a qaybta raadinta cusub ee liisaska muusikada. Jimicsiga ayaa fursad u siin doona heesaha si gaar ah loogu sameeyay barnaamijkan isboorti ee cusub.
Qeyb ka mid ah adeegga Apple Fitness + waa adiga dhexgalka adag ee Apple Music, iyadoo tii hore la adeegsanayo muusig tan dambe laga maqli karo. Si loo muujiyo isdhexgalkaan, Apple waxay ku darsatay awood ay si fudud ugu heli karto Fitness + liiska cayaaraha gudaha Apple Music.
Lagu daray qayb cusub oo ku saabsan baaritaanka bogga raadinta Apple Music cinwaankeedu yahay Fitness. Waxay kakoobantahay tiro aad u tiro badan oo ku saabsan liiska ciyaaraha. Waxa intaa dheer in lagu daro liistooyinka jira ee loo isticmaali karo jimicsi, qaybta sidoo kale waxaa ku jira qayb cinwaankeedu yahay "Apple Fitness + Studio Series."
Qaybtani waxay ka kooban tahay xulasho liisaska liiska, mid walbana metelaya qaab muusig ka duwan ama loogu talagalay hal jimicsi. Waxaa cusbooneysiiyay oo si joogto ah u daaweeyay tifaftireyaasha Apple Music iyo Fitness + tababarayaasha, liistada liistada ayaa u dhexeysa qoob ka ciyaarka iyo liistada muusigga elektaroonigga ah ee loogu talagalay wadista muusikada waddanka si ay u socoto, illaa liiska liidashada ee yoga.
Sidaad ogtahay, Apple Fitness + iyo Apple Music labaduba waxay qayb ka noqon karaan noloshaada waxayna kuu badbaadin karaan lacag yar haddii aad isqorto on Apple One. Dhibaatada ugu weyn, ugu yaraan Spain iyo hadda, waa adeegga isboortiga ee shirkadda lama heli karo. Waxaan rajeyneynaa inay dhowaan tahay oo aan tijaabin karno. By the way haddii aad iibsato Apple Watch waxaad heli doontaa bil tijaabo ah oo bilaash ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Music » Apple Music waxay ku dareysaa qayb cusub: Fitness +
Sida loo bilaabo Mac leh silikoon Apple ka ah waddo dibedda ah